Rudo kune mumwe nomumwe. Campaign: Rudo haruna ruzivo
Chiedza chiri bhiriji muDusseldorf yakava "Rainbow for Orlando"
Mushandirapamwe "Rudo haruzivi mitsara" PixelHELPER anopopotera kurwisana nekushungurudzwa kwevanhurume nevanhurume mumatongerwe enyika enyika. Kune nyika dzakawanda dzakawanda munyika, dzakadai seIran, Nigeria, Mauritania, Sudan, Yemen, Saudi Arabia kana United Arab Emirates, uko ungochani hahuri pamutemo uye hunorangirwa norufu!
Rudo haruna ruzivo rwevakadzi, hapana ruvara rweganda kana chitendero! Rudo haruna ruzivo! Tinoda kuti chirevo ichi chigoverwe naPixelHELPER kumativi ose enyika uye chiedza chine "Rainbow for Orlando". Kupera kwemaonero egocentric kuburikidza nekuchinja kwemaonero kunokosha zvikuru kuna PixelHELPER. Ngapedzisira tisunungure misoro yedu uye titeerere nguva dzose maererano neshoko rokuti "Kusununguka kubva muuranda hwekusarura". Kusununguka kwakadaro kwakanyanya kunorwadza. Zvinoreva kureva kuda kunamata uye kukoshesa nhau uye nhoroondo.
The kurwisa kupomba bhawa iri Orlando, Florida kwave kupfuura kurwadza, asi pasinei nezvose, hazvina kupindura urongwa LGBT munharaunda pamwe chete nzira. The Pixel Munyaradzi sei nerudo uye chiedza rakabvongodzwa vemhosva uye avo vanorwara änglichen chemabhazi. With unyanzvi chirongwa "Rainbow nokuda Orlando" tinoda kupa rutsigiro munharaunda kubva kuGermany uye New York. yedu danidziro Rudo pasina mitsara rakagadzirirwa kutsigira kodzero dzevanhurume pasi pose uye kusununguka gayana kubva mumajeri evanhu vose uye kuvadzivirira kubva pakuwedzera kusarurwa uye kutambudzwa. Muraraungu unofananidzira tariro uye kukwana. Pose apo vanhu vanoona muraravhe, zvakajeka: rima nemvura hazvichengetedzi shoko rekupedzisira.
PixelHELPER anoshandisa mabhokisi evasipi asingazivikanwi kune vanoita zvechani kune dzimwe nyika dzine ngozi kuti vaparidze nyaya kubva muupenyu hwezuva nezuva apo avo vanozvipira kuisa upenyu hwavo pangozi nekuda kwerudo rwavo.
Chiedza chekujekesa "Rainbow for Orlando" naOriver Bienkowski iri basa rinopfuurira iro mabhiriji anozivikanwa, zvivako uye masvingo ekugadzirwa kwemaguta ari kuchinjwa zvakare kune zvinonzi mabhutiro emvura. Kusvikira ikozvino, kuwedzera kune bhiriji rechiteshi munharaunda yezvinyorwa zveDusseldorf, Karl Branner Bridge muKassel yakadzorerwa zvakare. Iyi purojekiti yakaparadzanisa vanhu paDhadhira uye yakagadziriswa zvakasimba kune dzimwe nyika dzakashanyira vashanyi. Uyewo paMutambo Wemwenje, Gedhi reBrandenburg rakashandurwa kuva muraravhe. Uyewo unozivikanwa zvikuru Kasseler Bergpark Mhasasa, chikamu che UNESCO World Heritage, akatova nemuorivhi mufananidzo.
Chiedza chinoratidza rainbow flag saudi arab embassy & embassy we united arab emirates
Sangano reUnited Nations rinofanira kutumira varwi vesimbi - Blue Helmet kunyika dzenyika manomwe umo ungochani huri kurangwa nekufa uye dzinomisa izvi zvinopesana nevanhu. MuIran, Nigeria, Mauritania, Sudan, Yemen, Saudi Arabia uye United Arab Emirates, chirango chekufa chiri pedyo. Ikozvino hapana hunozivikanwa hwehurumende hwehukama hwechigunwe mune imwe mamiriro echiIslam.
Rudo haruna ruzivo rwepabonde, hapana ruvara rweganda kana chitendero, hakuna hurema kana nguva. Rudo haruna ruzivo. PixelHELPER anotanga chirongwa chekurwisa chirango chepabonde, izvo zvinorangwa nenyika dzakasiyana-siyana pasi rose.
Zvose zvikoro zvemitemo zveIslam zvakaramba mabasa ehurochani sevatadzi munguva yakapfuura. Kuita zvepabonde kunongororwa nenzira yekufananidzira seupombwe (Zina). Inopokana mukati mezvikoro izvi rudzi rwechirango chaifanira kuiswa mumatambudziko akasiyana. Mifungiro yakabva pakukomberedza kusvika kune chirango chikuru.
Isu paPielelHELPER tinofunga kuti zvinopenga kuti mugore ra 2016 rinokonzera kurangwa kwakadaro nokuti iwe unorarama rudo rusununguko. Maererano neshoko rokuti "ita rudo kwete hondo", tinotarisira kuti nyika dzichapa uye haizotongorori ungochani
Tsigira purogiramu yedu: Rudo haruna ruzivo
Kunyange makero mashoma anoita kusiyana! Ndapota shandisa Paypal, Betterplace, Indiegogo kana kuti classical transfer.
Bhengi: Sparkasse Magdeburg
Muridzi: PixelHELPER Foundation isingabatsiri GmbH
Better form donation fomu
Donate zvino kune mumwe wedu ari nani panzvimbo nokuda kwePixelHELPER
Ndapota shandisai mapurogiramu edu pa Facebook, Instagram & Twitter!
Kugovana ndekuchengetedza. Ndapota shingairira basa redu rekuitira basa.
Rudo kune mumwe nomumwe. Campaign: Rudo haruna ruzivo July 1st, 2019Oliver Bienkowski
Tagged: Rudo haruna ruzivo, Rainbow for Orlando
kuderedza zvombo Android App Bahrain 13 Federal Chancellery mugwenzi moto China boka revanhu mari moto kurwadziswa freeRaif kusununguka kutaura kwemaonero hercules rubatsiro rwekubatsira kambeyini mishandirapamwe Catalonia landmines Rudo haruna ruzivo Livestream Live hova Livestream swarm rubatsiro Morocco zvangu NSA mumba vasungwa vezvematongerwe enyika Rainbow for Orlando chombo Saudi Arabia remhashu Help spanish spring Spirulina Uighurs Uyghur kuchengetedza rusununguko United Stasi yekuAmerica upcycling zvokutengeserana zvombo Hongu tinopenya! zvichiongororwa